Faah faahino ka soo Baxaya Dagaalo ka dhacay Gobolka Shabeellaha hoose – hareerley News
Faah faahino ka soo Baxaya Dagaalo ka dhacay Gobolka Shabeellaha hoose
Dagaalada aad u Cuslaa ayaa shalay Gelinkii dambe iyo xalay waxa uu ka kala dhacay degmada Awdheegle iyo deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha hoose,waxaana uu u dhaxeeyey Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee dhawaan degmadaasi la wareegay iyo Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay Al-Shabaab weerareen Saldhigyada Cusub ee Ciidamada Dowladda ay ka sameesteen degmada Awdheegle,waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in uu dhacay dagaal culus oo mudo saacado ka badan socday.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa ay sheegeen in Al-Shabaab ay doonayeen inay dib ula wareegaan degmada Awdheegle, hayeeshee Ciidamada DANAB ee ku sugan halkaasi ay iska Caabiyeen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab.
Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa Xalay waxaa ay weerar ku qaadeen Saldhig Ciidamada Uganda ee qeybta ka ah AMISOM ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha hoose oo dhowr bilood ka hor lala Wareegay,waxaana halkaasi ka dhacay dagaal,sida ay dadka deegaanka sheegeen.
Dagaalka ka dhacay deegaanka Bariire ayaanan ilaa iyo hadda laga heyn wax faah faahin ah,waxaana Wararkii ugu dambeeyay ee saakay naga soo gaaraya deegaannada lagu dagaalamay ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda dhaq dhaqaaqyo Xoogan ka wadaan,isla markaana ay ku doonayaan inay kula Wareegaan deegaano kale.
Masar, Imaaraadka Carabta iyo sadex dal oo Yurub ah oo ku dhowaaqay isbaheysi ka dhan ah Turkiga
Dowladda Masar ayaa ku dhawaaqday xulufo ka dhan ah Dowladda Turkiga oo ay ku jiraan Greece, Qubrus, Imaaraadka Carabta, iyo Faransiiska si looga hortago dhaq-dhaqaaqa Turkiga ee Libya iyo badda Meditareeniyaan-ka. Ku dhawaaqistaan ayaa waxay timid kadib shir muuqaal ah oo ay wasiiradda arrimaha dibadda dalalkan yeesheen 11-kii May, sida xog cusub lagu ogaaday. War […]
Hoggaamiye goboleed Hub Uruursi bilaabay & dagaal laga cabsi qabo:-(XOG)
Posted on June 10, 2020 June 10, 2020 Author Hareerley News
Sida ilo xog ogaal ah inoo sheegeen hogaan ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa hub iyo ciidan u gaar ah ku uruursanaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe. Wararka la helayo ayaa daaha ka qaadata in Cali Guudlaawe uu doonayo inuu dagaal adag la galo Dowladda Federaalka haddii ay isku daydo […]
Hey’ada Caafimaadka Aduunka WHO Oo soo saartay digniin ku saabsan Cudurka Corona virus
In ka badan 8 milyan oo qof ayaa la xaqiijiyay inay qabaan cudurka ‘coronavirus’ adduunka oo dhan. ku dhawaad 3.8 milyan ayaa soo kabsaday, halka ugu yaraan 435,662 ay dhinteen, sida lagu sheegay xog aruurin ay sameysay jaamacada Johns Hopkins. Mareykanka, Brazil iyo Boqortooyada UK ayaa soo sheegay dhimashada ugu badan. Madaxa WHO Tedros Adhanom […]
Eng Yariisoow Oo lagu Wado in loogu Magac daro Garoonka Stadio Banaadir